Mmetụta nke Antarctica na ihu igwe ụwa | Netwọk Mgbasa Ozi
Antarctica bu kọntinent juru oyi nke mbara ala anyi ma o nwekwara oke ọrụ na imezi ihu igwe nke ụwa. O nwere ike ịmetụta okpomoku nke ụwa niile ma nyere anyị aka ịlụ ọgụ maka mgbanwe ihu igwe.
Agbanyeghị, ka okpomoku zuru ụwa ọnụ na-arị elu karịa, ikike Antarctica na etu o si daa. Kedu ka Antarctica si emetụta usoro okike gburugburu ụwa?
1 Mmetụta nke Antarctica na Ọzara Atacama
2 Njikọ dị n'etiti oké osimiri
3 Mmetụta nke Antarctica na ihu igwe
Mmetụta nke Antarctica na Ọzara Atacama
O doro anya na mmetụta nke Antarctica na ọkwa ụwa dị oke mkpa na ihe na-eme na ya ga-ekpebi ihu igwe nke akụkụ ndị ọzọ nke ụwa, gụnyere ndị nke tere aka na kọntinent a. Dịka ọmụmaatụ, nnukwu ice a na-emetụta ịdị adị nke ọzara Atacama na nghọta nke mbara igwe ya. A na-ahụta igwe ndị a kachasị mma na mbara ụwa nwere ike ịlele mbara igwe.
Ma gịnị jikọrọ Antarctica na ịdị adị nke ọzara a? Otu n'ime ihe ndị mere ka ọzara a bụrụ nke kachasị kpọrọ nkụ na mbara ala bụ kpọmkwem n'ihi mmetụta Antarctica nwere oké osimiri dị ugbu a na-ebili n'ụsọ oké osimiri nke Chile. Nke a na-eme ka mmiri dị jụụ ma na-ebelata usoro evaporation, nke na-ebelata mmiri ozuzo na igwe ojii na mpaghara ahụ.
Njikọ dị n'etiti oké osimiri
Antarctica nwekwara mmetụta na njikọ n’etiti oke osimiri. Iji nwee ike ịkọwa ya n'ụzọ dị mfe, enwere ike ịsị na mgbe mmiri dị ọcha nke glaciers gbazere (nke dị ntakịrị karịa mmiri nnu) wee banye na mmiri oke osimiri, ọ gbanwere nnu ya, nke na-emetụta mmekọrịta n'etiti oke osimiri na ikuku.
Maka na mmiri jikọtara osimiri niile nke ụwa (ọ bụ naanị mmiri, naanị anyị na-akpọ ya site na aha dị iche iche), ihe ọ bụla na - eme na Antarctica ọ nwere ike iwepụta ihe ịtụnanya dịka oke ọkọchị, mmiri ozuzo, wdg. Ebe ọ bụla na mbara ala. I nwere ike ikwu na ọ dị ka urukurubụba mmetụta.
N'ihi mgbanwe ihu igwe na okpomoku ụwa, ọnọdụ okpomọkụ na-arịwanye elu gburugburu ụwa. Na Antarctica, na Machị 2015, ruru ogo nke 17,5 degrees. Nke a bụ ọnọdụ kachasị elu edere na ebe a ebe ọ bụ na enwere ndekọ nke Antarctica. Cheedị ole ice nwere ịgbaze ma tufuo na okpomọkụ ndị a.
Mgbe ụbọchị anọ gachara, ọzara Atacama kpara n'ime naanị awa iri abụọ na anọ ụdị mmiri ahụ zoro n'ime afọ iri na anọ gara aga. Agbaze ice Antarctic mere ka okpomoku dị na mmiri dị nso na mbara ọzara, nke mere ka ihe ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ ma kpatara igwe ojii cumulonimbus. Ihe puru iche nke ihu igwe weputara otutu ide mmiri nke hapụrụ ngụkọta nke 31 nwụrụ na 49 na-efu efu.
Mmetụta nke Antarctica na ihu igwe
Oké oyi na-erugharị n'oké osimiri, etinyere na mpaghara nke Arctic yana kwa n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Antarctica, na-eme ka ụwa ọcha bụrụ "onye na-achịkwa ihu igwe ụwa" N'ihi eziokwu ahụ bụ na Korea na-arịwanye elu n'oge ọkọchị na oge oyi, ọ dị mkpa iji nyochaa ihe na-eme na Antarctica iji ghọta mkpa na njirimara nke ihe omume ndị a.
Otu ihe ndị ọkà mmụta sayensị na-eche ugbu a bụ na, n'ihi mmụba na-aga n'ihu na okpomoku ụwa, nnukwu ice ice Larsen C dị n'ihe ize ndụ nke ịhapụ. ihe dị ka puku kilomita isii nke nwere ike ịkwụsị ma kpatara oke ihe n ’ụwa niile. N’ime afọ iri atọ gara aga, ngalaba abụọ nke nnukwu ice, nke a na-akpọ Larsen A na Larsen B, adaala, ọ bụ ya mere ihe egwu ahụ ji dị nso.
O di nwute, eziokwu na ụdị ihe a na-aga n'ihu agaghịzi ezere ya. Ọbụlagodi na anwuru ikuku ụwa niile na-ebelata ozugbo, okpomọkụ ga-aga n'ihu na-ebili maka afọ ole na ole, nke ga-ezuru Larsen C ka ọ mechara wụpụ. Iswa bụ ebe obibi anyị, naanị otu anyị nwere. Anyị kwesịrị ilekọta ya tupu oge agaa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Mmetụta nke Antarctica na ihu igwe ụwa
Mgbanwe ihu igwe na-eyi oji oji na Teruel egwu